Qiso dhab ah: Saaxiibtey ayaa waxay iisheegtay inuu ninkeyga u galmooday - iftineducation.com
iftineducation.com – Qiso dhab ah: Saaxiibtey ayaa waxay iisheegtay inuu ninkeyga u galmooday
Qisadaan naga yaabisay ayaa waxaa noo soo dirtay gabar aqristayaasheena ka mid ah Fahmo ( mahan maga saxda ah).
Gabadhaan ayaa waxaay noo soo dirtay qoraal dheer ah ay ugu sheekeynayso arin qabsatay una baahan tahay in lagala taliyo
sheekada waxay ku bilaabatay sida tan:
Waxaan in mudo ah saaxiibo aheyn gabar ilaa aan walaala camal noqonay gurigeygana ila soo seexan jirtay, ilaa aan dhoor jeer ugu maseeray ninkeyga ay la kaftameyso waa kaftan xad dhaaf ah oo iga maseer siiyay.
anigiina waan xanaqay oo saaxiibteey xariirka ayaan u jaray gurigeyga ha iga imaanin ayaan dhahay, bilooyin ka bacdi ayaan maalin is aragnay anagoo wali is dagaalsan ayay waxay igu tiri naa ninka aad ka maseereyso ee ninkaaga asagaa iga daba dhareero ilaa hadana gurigeyga ayuu iigu yimaadaa arintaas oo aniga igu dhoqotay sida ineey biriq igu dhacday camal qalbi jabna igu noqotay.
Aqriso: dumaashigeey ayaa ii galmooday anigoo hurdaayo
waana aamini waayay oo waxaan is dhahay ameey adiga lee kugu kululeyneysaa ilaa maalin aan ka arkay labadooda oo isla qoslaayo jidka dhaxdiisa anigoo suuqa ka imid.
meeshaas ayaan anigi iyo ayadi isku dagaalnay jidka dhaxdiisa ninkeyga ayaana nakala celiyay waana u sheegay ninkeyga inuu naagtaan ka dheeraado aniga ma jecleysan dhawaashahooda.
waxaa iga sii careysiisay kadib markey telephone ka iga soo wacday iiney sheegtay in ninkeyga u galmooday ayna wada raaxeysteen dhoor jeer.
Hadaba shabakada galmada.net waxaan idiinka raba talo ma ninkeyga ayaan ku qabsada arintaan mase waa beenteeda oo shib ayaan ka dhahaa?
Shabakada galmada.net gabadhaan talada inbox ayaan ugu dirnay adigkana talo waad siin akrtiid adigoo nagala soo xariiraayo qeebta koments ka ama facebook geena (Aadan yo).
macaan siga dumarka xiliga galmada socoto